अक्सिजन नपाउँदा कोभिड अस्पतालको क्षमता विस्तार रोकियो | गोचाली खवर
बाँके, २१ बैशाख ।
बाँकेमा संचालित कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि क्षमता विस्तारमा पूर्ण विराम लागेको छ । अक्सिजन नपाएपछि तीन सय शैयाको कोभिड अस्पताल बनाउने योजना तुहिएको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले जनाएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै थपिदै गएपछि शिक्षण अस्पताल कोहलपुरलाई कोभिड र शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जलाई ननकोभिड अस्पताल बनाउने योजना विचमै तुहिएको उप–निर्देशक समेत रहेका कोभिड अस्पतालका इन्चार्ज डा. दिनेश श्रेष्ठले बताए ।
अक्सिजन अभावका कारण शिक्षण अस्पतालले एक सय बेडको कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ । एक सय बेडको कोभिड अस्पतालमा दैनिक एक सय २० सिलिण्डर अक्सिजन खपत हुने गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । तीन सय बेड कोभिड अस्पताल संचालनका लागि तीन सय ५० सिलिण्डर आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षण अस्पतालले लिक्वीड अक्सिजन पनि सिमित मात्रामा भएको उनको भनाई छ । लिक्वीड अक्सिजन भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । संक्रमित बढेपछि भारतले अक्सिजन पठाउन बन्द गरेको उनले बताए । ‘लिक्वीड अक्सिजन भारतबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । हामीसँग भएको लिक्वीड अक्सिजन पनि बढिमा दुई हप्ता टिक्ला । त्यसपछि झन समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अक्सिजनको ब्यवस्था गरे कोभिडका विरामीलाई हामी सेवा दिन तयार छौँ ।’
उनले चितवनबाट दुई सय सिलिण्डर ल्याउने तयारी भएकै बेला चितवन प्रशासनले ल्याउन नदिएको बताए । ‘चितवनबाट ल्याउने तयारी पूरा भइसकेको थियो । त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एकाएक ल्याउन दिनु भएन,’ डा. श्रेष्ठले भने ।
दुई हजार सिलिण्डर अक्सिजन माग, उत्पादन एक हजार मात्र
बाँकेमा दुई वटा अक्सिजन प्लान्ट छ । यहाँका प्लान्टको दैनिक एक हजार पाँच सय सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता छ । बाँकेमा उत्पादन भएको अक्सिजन कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कपिलबस्तु तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याउँदै आएका छन् ।
भेरी अस्पतालमा मात्र दैनिक पाँच सय सिलिण्डर अक्सिजन माग भएको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले तीन सय र बाँकेका होम आइसोलेशनमा दैनिक एकसय सिलिण्डर खपत हुँदै आएको एचओ अक्सिजन इन्डष्ट्रिज नेपालगन्जका संचालक अजय पाठकले बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले एक सय ५०, सुर्खेतले दुई सय ५०, दाङले दुई सय ५० र सुदूरपश्चिम प्रदेशले तीन सय अक्सिजन सिलिण्डर माग गरेको बताए । बाँकेका कोभिड अस्पताल र अन्य आइसोलेशनलाई पुग्ने अक्सिजन पर्याप्त छ, बाहिर पठाउनु पर्दा बाँकेमा अभाव भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
विद्युत नियमित नहुँदा अक्सिजन उत्पदानमा समस्या
उनले विद्युत अनियमित हुँदा अक्सिजन उत्पदानमा समस्या भएको बताए । एक पटक बत्ती जाँदा ३६ वटा सिलिण्डर उत्पादन रोकिने गरेको उनले सुनाए । उनले मंगलवार एक हजार चार सिलिण्ड अक्सिजन उत्पादन भएको बताए । ‘अक्सिजन उत्पादन बढाउन सरकारले विद्युत नियमित बनाउनु पर्छ । र, भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ल्याउन तथा अक्सिजन प्लाण्टको क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालगन्जको विद्युत नियमित नहुँदा सोँचे जस्तो उत्पदान गर्न नसकिएको बताए । विद्युत नियमित हुने हो भने दैनिक १२ सय सिलिण्डर उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले विद्युत नियमित गर्न तर्फ ध्यान नदिए आगामी दिनमा थप जटिल समस्या निम्तिन सक्ने औँल्याए । सरकारले समयमा बुद्धि नपुर्याए भोली गएर अक्सिजन अभाव भई जटिल समस्या निम्तिने खतरा छ,’ उनले भने ।
Previous articleस्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्न उप–महानगरको निर्देशन
Next articleडुडुवाको आइसोलेशनलाई रेड्क्रसको सहयोग